Oromo – Bunny Studio Help Center
[Waraabbii kana oomisha suur sagalee keenya keessatti itti fayyadamna. Kunis annisaa gaarii kan qabu,hawwataa fi ergaa guutuu kan dabarsu akka ta'uu feena.]
Ogeessa taatoo seenessaa sagalee sirrii argachuuf maaliif filannoo jalqabaa akka taane beektuu?
Jalqabuuf seenessawwan qulqullina ol'aanaa qabanii fi garee to'annoo keenyaan calalaman qofa isiniif dhiheessina. Dabalataan galaanni artiistota seenessa sagalee keenyaa filannoowwan kumaatamaan afaanota,akkaataa fi gatii isin gituun isiniif dhiheessu. hundaa olitti pirojeektiin ykn sagantaan keenya wabii gara ga'iinsaa qaba. tajaajila keenyatti yoo gamnmadoo ta'uudhaa baattan gareen bulchiinsa qophii keenyaa gidduu seenuun qarshii keessan isiniif deebisa. [Tokko tokkoo jechootaan booda gidduutti xiqqoo dhaabaa] gaaffiin gaafatame hin jiru.
Dhimma maamila keenyaaf dursa laanna. kanaafuu yeroo hunda gareen keenya isin gargaaruutti gammadoodha. Yeroo nufaana turtanitti muuxannoon argattan itti fufiinsa kan qabu,sirnawaa(pirofeeshinaala) akka ta'u ni mirkaneeffanna. [asitti xiqqoo dhaabaa] sana booda bashannanaa.
[Waraabbiin kun duula barbaacha gabaa suur sagalee(marketing campaign) niif itti gargaaramna. Kanaafuu gootummaa, hawwachiisaa fi kan soorgoo qabu akka ta'u feena.]
Addunyaa seenessa sagalee argachuun baay'ee cimu keessatti. Addunyaa hojiin taatoo seenessa sagalee qaalii ta'ee fi mijataa hin taane keessatti warraaqsa taatoo sagalee kana eegaluuf murteessine!
Deemsichi yeroo kamillee salphaa ta'ee hin beeku. ta'us yeroo kamiyyuu caalaa cimoodha nuti.
Dhawatuma dhawataan induustirii taatoo seenessa sagalee kana dijitaala gochuun mana keessanitti isiniif dhiheessineerra. Ergama kana keessatti isin hirmaachisneerra. kanaafuu abjuu kana dhugoomsuu kana keessatti qooda keessan akka ba'attan cimsinee isin irrraa eegna.
Duuba ilaaluun hin jiru.
Gara hojii kanaa ni dhufne,Addunyaas ni jijjiirre bakka amma jirrus geenyeerra [Yeroo xiqqoof dhaabaa] itti fufuuf.
Industirii taatoo seenessa sagalee harka keessan galchaa jirra.